समाज Archives - Page9of9- Halkara News
आगो दन्किरहेको कोठाबाट प्रहरी जवानले गरे बालकको उद्दार
काठमाडौं । प्रहरी प्रभाग, कोटेश्वरका जवान अजय मण्डल बिहीबार दिउँसो खाना खानलाई कोटेश्वरकै झोलुङ्गे पुल छेउ रहेको कोठामा पुगेका थिए । चिसोका कारण बाक्लो लुगा लगाएर बसेर उनले खाना खाँदै गर्दा अस्वभाविक राप महसुस गरे । निरन्तर राप आएपछि उनलाई शंका लाग्यो । ‘बाहिर गएर हेर्दा पल्लो कोठामा आगो दन्किरहेको रहेछ’, उनी भन्छन्...
सांसद अभिषेक शाहलाई लाग्यो ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग
बुटवल । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दर्ता भएको छ । कपिलवस्तु –३ बाट निर्वाचित सांसद शाहविरुद्ध राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा कलाकार श्यामकुमार मिश्राले आफ्नो ज्यान मार्ने प्रयास गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरमा जाहेरी दिएका हुन् । ...
कलंकी-महाराजगञ्ज-धोबीखोला सडकखण्ड पनि अब ३१ मिटर चौडा, जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अभियान अन्तर्गत कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला सडकखण्डका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो सडक बिस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिम...
कर्णालीमा जीप खस्दा ४ को मृत्यु
काठमाडौं । बाजुराको हिमाली गाउँपालीकाको केन्द्र धुलाचौरदेखि कोल्टी जाँदै गरेको जीप कर्णाली नदीमा खस्दा चार जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा जीप मालिकसमेत रहेका चालक बाजुरा जगन्नाथ ५ गोत्रीका अन्दाजी २५ वर्षीय रमेश शाहीसहित ४ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका डिएसपी उद्धव सिंह भाटले जानकारी दिए। से१...
हत्या आरोपमा १५ वर्षीय बालकलाई जन्मकैद फैसला !
सिन्धुलीमा १५ वर्षीय बालकलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । जिल्ला अदालत सिन्धुलीले हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका बालकलाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो । अदालतले मरिण गाउँपालिका–१ आहालेकी १३ वर्षीया छलिमाया मोक्तानको हत्यामा संलग्न बालकलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । उनलाई जन्मकैद हुने र नाबालक देखिएकाले जन्मकैदको आधा १४ वर्ष १...
भारत–पाक भिडन्तमा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्ष शुरुकै दिन भारतीय सेनामा कार्यरत एक नेपालीको निधन भएको छ । भारत र पाकिस्तानका सैनिकबीच गोली हानाहान हुँदा भारतीय सेनामा कार्यरत गोरखाका अर्जुन थापा मगरको निधन भएको हो । जम्मु कश्मिरको लाइन अफ कन्ट्रोलमा बुधबार भारत र पाकिस्तानी सेनाबीच गोली हानाहान हुँदा दुई भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थि...
त्रिशूलीमा बगिरहेकी युवतीलाई बचाउने को हुन् साहसी युवक ?
काठमाडौं । गत मंसिर २२ गते आइतबार दिउँसो २ बजे मुग्लिङस्थित आर्क ब्रिजबाट एक युवती त्रिशूली नदीमा हाम फालिन् । पुलको पारी पट्टी रहेको पुरानो मर्स्याङ्दी फ्रेस फिस रेष्टुरेण्टको छतमा बसेका एक युवकले युवती हाम फालेको देखे । उनी चिच्याए । युवकको चिच्याहट त्यही रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने सन्तोष गुरुङले सुने र दौडिएर रेष्टु...
बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
सुनसरी । महिला अनुयायी बलात्कार गरेको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत सुनसरीले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले सोमबार तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । उनलाई आफ्नै अनुयायी महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा गत मंसिर १६ गते पक्राउ गरिएको...
मोडलिङको लोभ देखाई युवतीलाई बलि दिन बिहार लिन लागेको खुलासा !
काठमाडौँ । युवतीले समयमै चलाखी अपनाएर अनाहकमै धर्मभीरु बाबाको बलिको शिकार हुनबाट जोगिएकी छिन् । मोडल बन्ने प्रलोभनमा परेर अपराधीको चंगुलमा फसिसकेकी एक युवतीले उनीहरुको गतिविधिप्रति शंका गरेर प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । उनको उजुरीको आधारमा प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान गरेपछि गम्भीर अपराधको खुलासा भएको हो । बिहीबार मह...